USS Bunker Hill (iCV-17) kwiMfazwe Yehlabathi II
Isithuthi se- Essex- classic carrier, i-USS Bunker Hill (i-CV-17) yangena inkonzo ngo-1943. Ukujoyina i-US Pacific Fleet, yaxhasa imizamo ye-Allied ngexesha le -campaign-hopping campaign kulo lonke iPacific. Ngo-Meyi 11, ngo-1945, i- Bunker Hill yayonakaliswa kakhulu yi-kamikazes emibini xa isebenza kwi-Okinawa. Ukubuyela eUnited States ukwenzela ukulungiswa, umphathiswa uya kuba engasebenzi kumsebenzi oseleyo.
Efunyenwe kuma-1920 nakwiminyaka yokuqala ye-1930, ii- Lexington kunye ne- Yorktown -class carrier zithuthi zenzelwe ukuhambelana nemimiselo ebekwe ngu- Washington Naval Treaty . Eli qhinga labeka ukulinganiselwa kwi-tonnage yeentlobo ezahlukeneyo zemikhosi yemfazwe kunye nokukhupha i-tonnage. Ezi ntlobo zezithintelo ziqinisekiswe kwi-1930 yaseNondon yaseLondon. Njengoko ukunyanyiswa kwehlabathi jikelele kwandisiwe, iJapan ne-Italy bashiya isakhiwo somnqophiso ngo-1936.
Ngenxa yokungaphumeleli kwenkqubo yomnqophiso, i-US Navy yaqala ukudala idizayini entsha, iklasi enkulu yezinto zokuhamba kunye nomnye owasebenzisa amava afunyanwa kwi-class- Yorktown . Isitya esipheleleyo sasininzi kwaye siphelele kwaye sibandakanye inkqubo yokuphakamisa indawo. Oku bekuqeshwe kwangaphambili kwi- USS Wasp (CV-7). Iklasi elitsha liza kuthwala iqela lomoya lamaqhawe angama-36, i-36 dive bombers, kunye ne-18 torpedo.
Oku kwakuquka iiHlankcats zeF6F , i-SB2C i-Helldivers kunye ne- TBF Avengers . Ukongezelela ekubeni neqela elikhulu lomoya, iklasi ibonise ingalo ekhuselekileyo yokulwa neenqwelo.
Utyunjwe i- Essex- class, i- USS Essex (CV-9), yafakwa ngo-Ephreli 1941. Le nto yalandelwa ngabathwali abongezelelweyo abongezelelweyo kuquka ne-USS Bunker Hill (iCV-17) ebekwe kwi-River River Shipyard e-Quincy, MA ngoSeptemba 15, 1941 kwaye wabizwa ngokuba yiMfazwe yaseBunker Hill walwa ngexesha le- American Revolution .
Ukusebenza kwiholo likaBunker Hill kwaqhubeka ngowe-1942 emva kokungenela kweMerika kwiMfazwe yehlabathi II .
I-Bunker Hill yehla ngeendlela ngo-Disemba 7 waloo nyaka, ngomhla wokukhumbula ukuhlaselwa kwePearl Harbour . UNksz Donald Boynton wakhonza njengomxhasi. Ukunyanzelisa ukugqiba ummeli, uMlambo u-Fore wagqiba umkhumbi entwasahlobo ka-1943. Wabhalwa ngoMeyi 24, uBunker Hill wangena kwinkonzo kunye noCaptain JJ Ballentine. Emva kokugqiba iilingo kunye ne-shakedown cruises, umphathisi-mali wayehamba ePearl Harbor apho wajoyina i-US Pacific Fleet ye- Admiral Chester W. Nimitz . Kuthunyelwe entshonalanga, yabelwa kwi-Admiral Almiral Task Force 50.3.
USS Bunker Hill (i-CV-17) - Uhlolo-nkcukacha
Uhlobo: Umthengisi wenqwelo
Umkhumbi: I- Bethlehem Steel Inkampani, uQuincy, MA
Ukukhutshwa phantsi: Septemba 15, 1941
Kwaqaliswa: Disemba 7, 1942
Ukumiselwa: ngoMeyi 24, 1943
Ukufuduswa: iitoni ezingama-27,100
Ubude: 872 ft.
I-Beam: 147 ft., 6 in.
Uyilo: 28 ft., 5 in.
I-Propulsion: 8 × ibilisi, 4 × Westinghouse ezijoliswe ngombane womoya, ii-4 × shafts
Ubungakanani: amawaka angama-20,000 e-nautical ngeenkiyini eziyi-15
Ukuzalisa: amadoda angama-2 600
4 × ama-twin ama-intshi ama-38 ama-caliber
4 × i-5 intshi enye yamashumi amabini ama-38
8 × ama-40 mm angama-56 mm
46 × engama-20 mm angama-78 engama-gun
NgoNovemba 11, i- Admiral William "Bull" iHalsey ijoliswe ku-TF 50.3 ukujoyina neCandelo lama-38 kwisiganeko esihlangeneyo kwisiseko saseJapan eRabaul. Ukuqaliswa kwiSolomon Sea, iinqwelo-moya ezivela eBunker Hill , e- Essex , nase-USS Independence (i-CVL-22) zatshintshe iithagethi zazo zaza zatshintsha ukulwa nokulwa kweJapan okwakubangelwa ukulahlekelwa kweenqwelo zeentshaba ezingama-35. Ngesiphelo sokusebenza ngokumelene neRabaul, iBunker Hill igxilile kwiiGilbert Islands ukubonelela ukukhuselwa kweTarawa . Njengemibutho yama-Allied yaqala ukuhambela kwi-Bismarcks, umphathisi-zithuthi waphendukela kuloo ndawo waza wahlasela uKavieng eNew Ireland.
I-Bunker Hill ilandele le mizamo ngokuhlaselwa kweMarshall Islands ukuxhasa ukuhlasela kweKwajalein ngoJanuwari-Febhuwari 1944.
Ngokubanjwa kwesi siqithi, inqanawa yahlanganisana nabanye abathinteli baseMelika ngenxa yokuhlasela okukhulu eTruk ngasekupheleni kukaFebhuwari. Ukujongelwa yi -Admiral Marr Mitscher yangaphambili , ukuhlaselwa kwaphumela ekucwilweni kweenqwelo ezisixhenxe zaseJapan kunye nezinye iinqanawa. Ukukhonza kwiMitscher's Fast Carrier Task Force, i- Bunker Hill eqhutyelwa phambili kuhlaselwa eGuam, eTinian, naseSaipan kwiMarianas ngaphambi kokushaya iithagethi kwiiIlau zasePalau ngoMatshi 31 no-Ephreli 1.
Imfazwe yoLwandle lwasePhilippine
Emva kokubonelela ngesikhalazo sokuhlaselwa kukaGeneral Douglas MacArthur e-Hollandia, eNew Guinea ngasekupheleni kukaApreli , i-aircraft yaseBunker Hill yaqhuba iindidi zokuhlaselwa eColly Islands. Ukuqhuma ngasentla, i-Fast Carrier Task Force yaqala ukuhlaselwa ekuxhaseni i-Allied invasion yaseSaipan . Ukusebenza kufuphi neMariana, iBunker Hill yathatha inxaxheba kwi- Battle of the Philippine Sea ngoJuni 19-20. Ngomhla wokuqala wokulwa, umphathi wabetha ibhomu yaseJapan eyabulala amabini kwaye yalimala engamashumi asibhozo. Ukuhlala okusebenzayo, i-aircraft yeBunker Hill yanikele inxaxheba ekuhlanganyeleni okubambene nabaseJapan abalahlekelwa zithinteli ezintathu kunye neenqwelo-moya ezi-600.
Kamva u msebenzi
NgoSeptemba 1944, iBunker Hill yabetha iithagethi kwiNtshona Koloni zaseColomon ngaphambi kokuba iqhube i-Luzon, Formosa ne-Okinawa. Ngesiphelo sale mi sebenzi, umphathisi-mvume wathola umyalelo wokushiya ummandla wezemfazwe ngokugqitywa kwi-Bremerton Naval Shipyard. Ukufika eWashington, iBunker Hill yangena egcekeni kwaye yafumana isondlo rhoqo kwaye yayinezikhuselo zayo zokulwa nezikhuselo.
Ukusukela ngoJanuwari 24, 1945, yafuduka kwintshona yaza yabuyela eMitscher kwimikhosi yokusebenza eNtshona Pacific. Emva kokumboza i- landing ku-Iwo Jima ngoFebhuwari, iBunker Hill yathatha inxaxheba ekuhlaselweni kwezilwanyana zaseJapan. Ngomhla ka-Matshi, umphathiswa kunye nabathengisi bawo bajika kwintshona-ntshona kunceda kwi- Battle of Okinawa .
Ukufuduka kweso siqithi ngo-Ephreli 7, inqwelo yeBunker Hill yathatha inxaxheba ekunqobeni ukusebenza kwe-Ten-Go kwaye incedwe ekutshiseni i- Yamato yebhinqa . Ngexa ehamba kufuphi ne-Okinawa ngo-Meyi 11, iBunker Hill yahlulwa yi- A6M Zero kamikazes. Oku kwabangela ukuqhuma okunamandla kunye ne-petroli umlilo owaqala ukutshisa iinqanawa waza wabulala aba-346. Ukusebenza ngamandla, amaqela okulawula umonakalo kaBunker Hill akwazi ukuzisa umlilo phantsi kolawulo kwaye alondoloze umkhombe. Ekhubazekile, umthwali wasuka e-Okinawa waza wabuyela eBrmerton ukuze alungise. Ukufika, i- Bunker Hill yayiseseyadini xa imfazwe iphelile ngo-Agasti.
Ukubeka olwandle ngoSeptemba, uBunker Hill wakhonza kwi-Operation Magic Carpet eyasebenza ukubuyisela ikhaya lase-American servicemen ukusuka phesheya. Eyenziwe ngoJanuwari 1946, umphathiswa wasala eBrmerton waza wachithwa ngoJanuwari 9, 1947. Nangona aphinde ahlaziywa ngamaxesha amaninzi kwiminyaka emibini ezayo, iBunker Hill yayigcinwe kwindawo. Ukususwa kwiRejista yempahla yeNdiya ngoNovemba ka-1966, umphathiswa wabonwa njengendlela yokuhlola i-electronics yokuhlola kwi-Naval Air Station yaseNorth Island, eSan Diego kuze kudayiswe ngo-1973. kunye ne-USS Franklin (iCV-13) i- Bunker Hill yayisinye sezimbini ezimbini zee- Essex ezingazange zisebenze ngenkonzo esebenzayo emva kweMpi yaseMelika yaseMpi.
IQuasi-iMfazwe: iMbambano yeMelika yokuqala
Gcwalisa iikholeji zaseMerika
Imfazwe Yehlabathi I / II: USS Oklahoma (BB-37)
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yaseHtton Road
Ukusebenzisa iNgqungquthela engaphelelekanga
Umhlobo omtsha Umkhweli wokuHlola i-Icebreaker Umsebenzi